राति आगो र हिटर बालेर सुत्नुअघि यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
जाडो सुरु भएसँगै मानिस न्यानोको खोजीमा लाग्छन् । चिसोबाट बच्न विभिन्न उपायसमेत अपनाउने गर्छन् । तर, त्यही उपाय कहिले–काँही मृत्युको कारणसमेत बन्नसक्छ भन्नेतर्फ भने धेरैको ध्यान जादैन ।
गत साता देशैभर पानी परेपछि चिसो ह्वात्तै बढेको छ । चिसोबाट बच्न आगो बाल्ने, कोइला, ब्रिकेट, ग्यास....
श्रीमतीको कुरा नसुन्न ६२ वर्षसम्म बहिरो भएको अभिनय गरेपछि......
प्रायः श्रीमान श्रीमतीबिच झगडा भएको समाचार धेरै सुन्न पाइन्छ । यस किसिमको झगडाबाट बच्न मानिसहरुले विभिन्न किसिमका उपायहरुको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।
अमेरिकाका एक व्यक्तिले भने अनौठो तरिका अपनाए । अमेरिकाका ८४ वर्षीय बेरी डावसनले आफ्नो श्रीमती डोरोथीको बोली सुन्न नपरोस् भन्नका लागि ६२ वर्षसम्म....
सुत्नका लागि कुन रङ्गको प्रकाश उत्तम ?
बिबिसि । मोबाइल र कम्प्युटरको स्क्रीनबाट निस्कने नीलो प्रकाश निद्राका लागि खराब हुन्छ भन्ने कुरा असत्य हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् ।
निद्राका लागि कस्तो रङ्गको प्रकाश उत्तम हुन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका म्यान्चेस्टर विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले नीलो प्रकाश अनिद्राको प्रमुख कारक नभएको बताएका छन् ।
जब गाईमा चढेर आईन दुलही
विवाह समारोहमा विदाईको बेला हामीले आजसम्म दुलहीलाई कार वा डोलीमा चढेर विदाई भएको देखेका छौं । तर चीनमा भने अचम्मको घटना भएको छ । चीनमा आफ्नो विवाहमा गाईमा चढेर दुलाहा दुलही घर गएका छन् ।
३७ वर्षकी झेग फु की यह ख्याहिश र उनको दुलाहा....
दहीबारे रोचक तथ्य, कसले सुरु गर्यो जमाउन ?
दही हाम्रो खानपानको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भइसकेको छ । दहीका विभिन्न फाइदाबारे हामी जानकार छौँ । दही विश्वमा सबैभन्दा धेरै खाइने खानाहरुको सुचीमा पनि पर्छ ।
तर, दही जमाउन कसले सुरु गर्यो होला ?
नेपाल वा भारतका देशमा कहिलेदेखि दही खाइँदै आयो होला भन्ने कुनै अनुमान....
मानिस जस्तै अनुहार भएको कुकुर
न्यूजलय आइतबार २९, मङि्सर २०७६
मानिसहरु आफूले पालेको जनावर र उसले गर्ने व्यवहारको बारेमा निकै उत्साह साथ साथीहरुलाई सुनाउने गर्छन् । यस्तै एउटा जनावरको अनौठो चर्चा अमेरिकामा भएको छ । यहाँ अचम्मको कुकुर छ त्यो कुकुर आफ्नो सुन्दरताको कारण अहिले दुनियाँमा भाइरल भइरहेको छ ।
सबै कुकुरको आफ्नो आफ्नो बंश....
मे २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय चिया दिवस घोषणा
एजेन्सी । मे २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय चिया दिवसको रुपमा घोषणा गरिएको छ ।
भारतले चार वर्षअघि मिलानमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य र कृषि संगठन (एफएओ) को अन्तर सरकारी समुहको बैठकमा प्रस्ताव गरेकोे हुँदा संयुक्त राष्ट्र महासभाले २१ मेलाई अन्तर्राष्ट्रिय चिया दिवस घोषणा गरेको हो ।
कसरी छुट्याउने नक्कली र सक्कली मह ?
मानव स्वास्थ्यको लागि मह निकै फाइदाजनक मानिन्छ । त्यसैले बजारमा यसको माग धेरै हुने गर्छ । यही आवश्यकताका कारण अर्गानिक मह भन्दै बजारमा नक्कली महको बिगबिगी पनि धेरै छ । महको शुद्धताबारे जानकारी नभएकाहरु बजारमा विभिन्न बाहामा ठगिने गरेका हुन्छन् ।
चिनी पानीमा मौरीको चाका....